လွယ်လွယ်ကူကူနူးညံ့။ အလွန်ပေါများသောကိတ်မုန့်ပန်းသီးနှင့်အတူ | သာဓက
Merienda60 မိနစ်12 ကလူ၃၃ ကယ်လိုရီ
ကျနော်တို့ကနှင့်အတူရှိသွားပါ ရိုးရှင်းတဲ့ရေမြှုပ်ကိတ်မုန့်, ​​ထောပတ် နှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအချို့သောအသီးနှင့်အတူ။
ငါတို့တစ်လုံးတည်းအတွက်မုန့်ဖုတ်မယ် မုန့်ဖုတ် ငါတို့စားပွဲသို့ဆောင်ခဲ့ ဦး မည်ဟု ဆို၍၊ သင့်တွင်ဓာတ်ပုံတွင်တွေ့ရသည့်အရင်းအမြစ်မရှိလျှင်သင်၏ပုံမှန်ရေမြှုပ်ကောင်ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။
ငါတို့မုန့်စိမ်းကိုလုပ်မည် ပန်းသီးဘောလုံး မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ၊ ပြီးတော့မီးဖိုထဲကအအေးခံတဲ့အခါငါတို့ရေမြှုပ်ကိတ်မုန့်ကိုဖုံးအုပ်ပေးလိမ့်မယ် သကြားမှုန့်။ ဒါလွယ်ကူပါတယ်။
ဂျုံမှုန့်၏ 200 ဂရမ်
တော်ဝင်အမျိုးအစားသကြားလုံးများအတွက်တဆေးကို 10 ဂရမ်
သဘာဝဒိန်ချဉ်၏ 80 ဂရမ်
ကျနော်တို့မီးဖို 180 ဒီဂရီမှ preheat ။
ကျနော်တို့ထောပတ်ဖန်နှင့်အစီအစဉ်တွင်ထား၏4မိနစ်, 60 °။ မြန်နှုန်း 1။ ကျနော်တို့အရည်ပျော်တဲ့ထောပတ်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။
ငါတို့ထားတယ် ဖန်၊ သကြားနှင့်ကြက်ဥများတွင်ပရိုဂရမ်းမင်းဖြင့်ရောစပ်သည် 1 မိနစ်, စက္ကန့် 30, မြန်နှုန်း 4.
ဂျုံ၊ ဂျုံမှုန့်၊ ဂျုံမှုန့်၊ ငါတို့အစီအစဉ် 1 မိနစ်နှင့်စက္ကန့် 30, spike မြန်နှုန်း.
ငါတို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားပြီ 1 မိနစ်နှင့်စက္ကန့် 30, spike မြန်နှုန်း နှင့်ရွေ့လျားမှုအတွက်ဓါးသွားနှင့်အတူကျနော်တို့အရည်ပျော်ထောပတ်ထည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန့်စိမ်းကိုပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၀ × ၁၈ စင်တီမီတာ) သို့မဟုတ်အချင်း ၂၂ မှ ၂၆ စင်တီမီတာအကြားရှိထောင့်မှန်သို့မဟုတ်ပတ်ပတ်လည်ရေမြှုပ်ကိတ်မုန့်တစ်လုံးထဲထည့်လိုက်သည်။
ပန်းသီး ၂ လုံးကိုလျှော်ပြီးသင့်လျော်တဲ့အိုးတွေနဲ့လုပ်တယ်။ ငါတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုအချပ်ဒါမှမဟုတ် Cube တွေခွဲလိုက်ရုံပဲ။ ပန်းသီးကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။
၁၈၀ မှာဖုတ်တယ်° မိနစ် ၂၀ ခန့်ကြာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - သီဟသူရ » Thermomix ချက်ပြုတ်နည်းများ » မုန့်ချို » မုန့်ဖုတ်ပန်းကန်ထဲမှာပန်းသီးဘောလုံးနှင့်အတူရေမြှုပ်ကိတ်မုန့်
မာရီယာ Josefa ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါကြိုက်တယ် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်တစ်ခြားကွဲပြားခြားနားသောစာရွက်ဖြင့်ငါ့ကိုအံ့အားသင့်စေသည်။ နေ့တိုင်းစာရွက်ချတာဟာကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလော့ဂ်တွေအများကြီးမှာတစ်ပတ်တည်းမှာပဲစာရွက်တစ်ရွက်တည်းသာတင်ထားတာတောင်မှ၊ အဲဒါတောင်မှမရှိတာပါ။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး thermomix ဘလော့ဂ်ပဲ။ ဤကဲ့သို့သောဆက်လုပ်ပါ။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
María Josefa ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှလည်းမာရီယာဟိုဖ်ဖာအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်စာကိုဖတ်ရှုခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြစ်စေသည်ဟူသောထင်ယောင်ထင်မှားကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ။ 🙂ကြီးမားသောအနမ်း
crunchiest နှင့်အရသာအရှိဆုံးဖုတ်ကြက်သား nuggets